I-China XY-2413P yoyilo lwelaphu elenzelwe into enokwahlulwa kokwahlulwa kokwenziwa kunye nefektri | Shuolong
I-XY-2413P yoLwakhiwo lweMeshini yoLwahlulo lweMesh
Ubunzima: 3.43kgs / m2
Ubunzima beMesh: 2.5mm
Ubude beMax: 8m
Umphezulu Treament: ipeyinti
I-SHUOLONG yokwakha umnatha wescreen kunye nezicelo zokwahlula igumbi zinciphisa ukuqaqamba kwiipesenti ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwipateni yemesh ekhethiweyo, kwiindawo ezihlala zihlala kwisakhiwo njengegalelo ekukhanyeni kwemini kunye neembono zekhredithi. Izicelo zangaphakathi zokufiphaza zihlala ziphindwe kabini njengonyango lwefestile okanye ezinye iindlela ezizodwa zoyilo lwangaphakathi.
Ixesha lokukhokhela: 14-21 iintsuku
Ngakumbi nangakumbi uyilo lukhetha umnatha wesinyithi njengento ebalulekileyo kuyilo loyilo, kuba umnatha wentsimbi unokwenza indawo yoyilo ibe banzi. Uhlobo lwe-mesh yesinyithi alutshatanga, kwaye lungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zeprojekthi nganye yoyilo. Okubaluleke ngakumbi, uyilo lujolise ekwenzeni umxholo woyilo ube mhle kwaye usebenze. Umnatha wentsimbi wolwakhiwo unokuyenza.
Ukukhanya kweseyile kuyila ukubonelela komoya wendalo. Siyakwazi ukwenza ngokwezifiso indawo evulekileyo ye-mesh oyikhethileyo ukwenzela ukuba iimfuno ezithile zeprojekhthi zinokufezekiswa. Uyilo lobugcisa lubonelela ngokhuseleko olusebenzayo kwelanga; Ukucoca ilanga kunye nokunciphisa ubushushu ngaphakathi kwesakhiwo ngokubonakalayo.
Intoni'ngaphezulu, Ukuba ufuna ukongeza izinto zoyilo lwesinyithi kwiiprojekthi zakho eziqhubekayo okanye ezizayo, nceda unxibelelane nathi ngokuthe ngqo. Ukongeza kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphezulu, sinokubonelela
Sinokukunika izixhobo ezifanelekileyo ngokweemfuno zeprojekthi yakho. Nokuba ngumgaqo kaloliwe othe tye okanye uloliwe ojijekileyo onendlela egobileyo, u-SHUOLONG unokukunceda uyiqonde. Ubungqingqwa bezincedisi esikunika zona ubuncinci yi-2mm, kwaye ubomi benkonzo bude. Ukuba usenemibuzo malunga nenkqubo yofakelo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi, siya kukunika ividiyo eneenkcukacha zokufaka ukuze uphendule amathandabuzo akho.
1) iiPC nganye zipakisha ngephepha, ii-1-5 pcs kwibhokisi yeplanga;
1.Amava eminyaka engama-40 : Ngaphezulu kweminyaka engama-40 yamava emveliso yocingo.
2.Isiqinisekiso Somgangatho: I-odolo nganye iyavavanywa kwaye ilawulwe ngokungqongqo ngokwemigangatho ephezulu kunakwinqanaba lehlabathi.
3.Inkonzo ehleliweyo: Ukongeza kwiifayile zethu ezikhoyo, sinokuzilungiselela iimfuno zakho zoyilo
4.Ixabiso elifanelekileyo: Siza kutshatisa nayiphi na isampulu okanye ukumelwa onikwe ezinye iinkampani. Ukuthatha ithuba lesithembiso somdlalo wexabiso usithumele nje ikoteyishini ebhaliweyo evela kwenye inkampani kwaye siya kulibetha ixabiso labo ubuncinci nge-10%
Ukuba ufuna ukubeka iodolo okanye ufuna ukwazi ngakumbi ngeenkcukacha zentsimbi, nceda uthumele umyalezo wakho kwiwebhusayithi yethu, usitsalele umnxeba okanye usithumelele i-imeyile. Siza kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24!
Edlulileyo: XY-3294 Flat Wire Metal mesh Screen
Okulandelayo: I-XY-2222G yeLaphu leNsimbi yeMesh yeSikrini kunye neKhabhinethi
Uyilo loYilo lweMesh
Ilaphu loyilo loyilo
Ilaphu eliphambili lomluki wocingo
Indwangu yensimbi yokwakha iiFacade
I-Metal Fabric Yokwahlula indawo
Intsimbi enemingxuma Ilaphu
Elukiweyo Metal Ilaphu
XY-A4518T Ubhedu Flat Spiral enemingxuma Space Par ...
I-XY-8914 eyahlulahlula i-Metal
XY-3012 Stainless Yokwakha enemingxuma Ilaphu ...
I-XY-3821 yoYilo loCingo lweNethiwekhi
I-XY-M4365 eyahlulahlula i-Metal